के हो हिमोफिलिया ? कसरी लाग्छ
रासस बुधबार, बैशाख ४ २०७६
काठमाडौँ । बुधबार विश्व हिमोफिलिया दिवस ‘पहुँच र पहिचान’ भन्ने मुल नाराका साथ विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरुले धुमधामका साथ मनाए तर, कतिपय आम नेपालीहरुलाई हिमोफिलिया रोग के हो भन्ने नै थाहा छ्रैन । साथै नेपालमा कति हिमोफिलियाका बिरामी छन् ? हालसम्म यसका बारेमा कुनै अध्ययन अनुसन्धान भएको छैन ।
रगत जमाउन आवश्यक तत्वको कमीका कारण लामो समयसम्म रक्तश्राव भइरहने अवस्थालाई हिमोफिलिया भनिन्छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार प्रति दश हजारमा एक जना हिमोफिलिया समस्या लिएर जन्मन्छन् ।
सङ्गठनले नेपालमा करीब ३ हजार सो रोगका बिरामी रहेको हुनसक्ने अनुमान गरेको छ । हिमोफिलिया सोसाइटी नेपालका महासचिव मुकुन्दमणि घिमिरे जनचेतनाका अभावका कारण अझै पनि हिमोफिलियाका बिरामी खुलेर बाहिर आउन सकेका छैनन् । हालसम्म सोसाइटीमार्फत ६८० जना मात्र सम्पर्कमा आएको उनले जानकारी दिए ।
उहाँका अनुसार ‘फ्याक्टर आठ’ कमी हुनेलाई हिमोफिलिया ‘ए’ र ’फ्याक्टर नौ’ कमी हुनेलाई हिमोफिलिया ‘बी’ हुन्छ । घाउ, चोट, ठक्कर आदिका कारण मात्र नभई आफसे आफ पनि आन्तरिक रक्तश्राव भइरहने र अत्यधिक पीडा हुने, पटक पटकको रक्तश्रावका कारण जोर्नी वा मांशपेसीहरू सुन्निने र रक्तश्रावका कारण जोर्नीहरू बिग्रने, जोर्नीहरू बिग्रिएपछि नजिकका मांशपेशीहरू सुक्दै जाने र अन्ततः गम्भीर अपाङ्गता सिर्जना हुन्छ ।’
यसको रोकथाम त्यही तत्वको प्रतिस्थापनबाट मात्र सम्भव हुन्छ । सोसाइटीका अनुसार प्रत्येक रक्तश्राव हुँदा प्लाज्मा÷फ्याक्टर दिएर उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ । एउटा हिमोफिलियाका रोगीलाई उपचार गर्न वार्षिक रु पाँच लाख २० हजारसम्म खर्च हुने गर्दछ ।
बच्चाहरु बामे सर्दै गर्दा शरीरमा निलडामहरु देखिने, दाँत साटिँदा रक्तश्राव भइरहने, बेलाबेलामा जोर्नी तथा मांशपेशीहरु सुन्निने र अत्यधिक पीडा हुने, दिसा पिसाबमा रगत देखापर्ने आदि हिमोफिलियाका लक्षण हुन् । हेमोफिलिया रोगको औषधि जीवनभर लिनुपर्छ ।